टाईसुटभित्र अल्झिएको दुःख - Everest Uncensored
टाईसुटभित्र अल्झिएको दुःख
गुड मर्निंग सर ! हाउ वाज योर ट्रिप ? भनेर सफा सुग्घर कपडामा सजिएकि हसिली फरासिली युवतीले सोध्दा होटलमा बस्न आउने बिदेशी वा स्वदेशी पाहुनाहरु आत्मीय भावनाको आभासका साथ खुशी हुन्छन । पाँच तारे होटलदेखि ताराबिहिन होटलहरु लगायत पर्यटकीय क्षेत्रका फास्ट फुडहरुले आफ्ना अतिथिहरु आकर्षित गर्नका लागि कर्मचारीहरुको यो बाह्य कलालाई निकै प्रश्रय दिएको पाइन्छ । भवनको सजावट र सफासुग्घर तथा टाईशुटमा जमेका कर्मचारीहरुको हाउभाउ देख्दा जो कसैलाई पनि उक्त स्थान आकर्षक लाग्न सक्छ । तर त्यहीँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको वस्तविकताचाहिँ ज्यादै दुःखद हुन्छ । आन्तरिक आवश्यकताभन्दा पनि बाह्य देखावटका लागि व्यवस्थापनले वर्षको एकपटक दिने सर्ट पाइंट, टाई, जुत्ताले उनिहरुको वास्तविक आवश्यकता पुरा गर्न सकेको हुँदैन ।
बाग्लुंगकि इन्दिरा शर्मा काठमान्डुको प्रतिष्ठित तारे होटलमा वेट्रेसको रुपमा काम गर्छिन । झलक्क हेर्दा तेइस चौबिस वर्षकि देखिने इन्दिरालाई स्वदेशी विदेशी परिकारको नामको साथै अतिथि सत्कारको पनि राम्रो ज्ञान रहेको छ । हिमाली संस्कृति झल्काउने शेर्पाहरुको पहिरन लगाएर पेशेवर वेटरकलाको शैलीबाट कफि र अन्य परिकार सर्भ गर्दै हिँडेकि इन्दिराको छातिभित्र आफ्नै चोट लुकेर रहेको छ । तर तीनको मुस्कानमा भने यस्तो छनक पनि पाइँदैन । बिहानदेखि यताउता गर्दागर्दै गलेको खुट्टाको दुःखाई पनि अतिथिको आतिथ्यमा बिर्सेकि छिन उनले । धनाढ्यहरुको संगतमा उनिहरुको फेशन र खर्च देख्दा आफ्नो वास्तविकता नै बिर्सनुपर्ने हुंछ । तर ड्युटी सकिएपछि
मासिक चार हजारको तलब र एक छाक बिदेशी खाना सहितको जागिरे जीवन सकिएपछि भाडामा लिएको एक कोठामा पुग्दा देखिने वास्तविकता ज्यादै पीडादायी हुन्छ यस्ता कर्मचारीहरुको लागि । होटलबाट बाहिर निस्कँदा बित्तिकै एक पाउ तरकारी किनि आफ्नो किचन र बेडरुम एउटै कोठामा रहेको डेरामा पुगेर एउटा कुनामा रहेको कालो प्लाश्टिकबाट चामल निकालेर पकाउनु पर्दा वास्तविकताले उनिहरुलाई चिथोर्छ ।
यस्ता होटलका साना कर्मचारी त पेलिए पेलिए, म्यानेजर सम्मका हरुले पनि आफैँ निर्णय लिन सक्दैनन । वित्तिय संघसंस्था र वायुसेवाहरुले राम्रै आवरणमा राम्रै तलव दिने भएतापनि त्यहाँका कर्मचारीहरु पनि श्रमशोषणबाट आजीत छन । उनिहरुलाई देख्दा म्याक्सिम गोर्किले आमा उपन्यासमा वयान गरेका मजदुरहरु जस्तो लाग्छ । राजधानीका आफुलाई ठुला र आकर्षक देखाउने व्यवसायिक संस्थाहरुले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुको श्रमशोषण नै गरिरहेका छन ।
अपवादमा रहेको एक दुई होटलबाहेक प्रयः होटलका कर्मचारीहरुको समस्याहरु यस्तै रहेका छन । तर उनीहरुको अडटाइम डयुटी र ओभरटाइम्ले गर्दा महिनाको अंत्यमा भने केही मोटो रकम हात पार्न उनिहरु सफल भने हुंछन ।
यहाँ निर एउता कुरा अर्को के पनि छ भने ठुला होटलमा काम गर्नेहरु रमाइलो र अरुले भन्दा केहि बढि जानेका छौँ भन्ने घमन्ड भने देखाइरहेका हुंछन । विदेशीहरुको उठबसमा बिदेश जान पाउने धाक पनि उनिहरुले देखाइरहेका हुंछन । तर आत्मसम्मानसाथ आफ्नै देशमा कमाएको सानो मानो पनि विदेशमा कमाएको भन्दा इज्जतदार हुंछ भन्ने कुरा उनिहरुले कहिले बुझ्ने होलान ?